10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe
Europe soo saarta oo gubtay, lacagta ah oos kafeega, waxa ay leedahay Dukaamada ugu fiican iyo makhaayadaha ee Europe. Waa kafeega jecel bunka iyo si saraaxad leh, wax weyn ka badan oo kaliya in. dhaqanka Cafe waa daaqad dunida. Waxaan ka badan inta aan soo booqan raadiyaan dukaamada qaxwada matxafyada xiiso leh, taxadiri, macbudyo, iyo kaniisadaha! Maxaa lahaa Paris, Vienna, iyo Italy ayaa waxaa ka maqnaan dhaqankooda cafe mabsuud?
Halkan waxa ku jira 10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe!
Coffee iyo makhaayadaha noo xirmaan. Waxaan kabasho iyo caraf, hawlgeliyaan dadka deegaanka oo xiiso leh ama kuwa aad jeceshahay, oo ka goo goynta jahwareerka nolosha maanta. Waa elixir ah ee wax soo saarka.
Waxaa jira boqolaal dukaan kafeega fiican ee mudan in Europe booqanaya, kuwanu waa xulasho waxa aynu rumaysan nahay in ay 10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe:
1. Barcelona: Shaydaanku Coffee Corner
dukaan kafeega Tani dhigeysa misigta ee hipster. Waxaa iska leh a 25 sano jir ah waa kan jacayl la bean qaxwaha. Waxa uu xidhhidha baasana farshaxanka aloosnayd daryaa uu. Waxay la xilli beddelo marka hubi inaad isaga weydiiso wixii boorish hadda waa.
Si loo tacaamulo falna sanyahay, kuwaas oo, noocyo kala duwan oo cunto fudud oo macmal ah waa la iibsan karaa. Jiid ilaa kursi, raaxaysan daaqadaha weyn in aynu durdur iftiinka iyo daawado go dunida by. Tani waxay xaqiiqdii waa mid ka mid ah dukaamada qaxwada ugu fiican Yurub.
Deco Art waa qaab qurux badan ee Cafe Odeon ee Zurich. Tani classic Bohemian albaabka u furay in 1910 oo waxay caan ku tahay in ay caado u ah qorayaasha, Gabayaana, fannaaniin, iyo waxgaradka. Qaar ka mid ah dadka soo booqda caanka ah waxaa ka mid ah ugu Albert Einstein iyo Picasso.
Tani waa dugsiga jir xarrago Yurub la saqafka sare, rakiban Brasserie, darbiyada muraayadda ah, iyo adeegayaasha dharka rasmiga ah u labisan.
dukaan kafeega A isticmaalo-u waxyoonay ee Paris waa waxa lagu siiyo marka Australiyaanka ah iyo Frenchie bilowdo dukaan kafeega ah, in mid ka mid ah dhaqanka cafe caanka ah magaalooyinka waalneyn adduunka ugu. Waxa ay taasi sare on liiska dukaamada qaxwada our ugu fiican Yurub.
O Coffeeshop ma niyad jabin la cadcad qaar ka mid ah oo ay ku jiraan noisettes, koofiyadaha, iyo cadaan fidsan. Ukun Benedict waa showstopper a, si loo hubiyo in la sameeyo si loo dalban!
Vienna leedahay taariikh dhaqan kafeega hodan; dadka soo urureen oo ay kala hadlayaan siyaasadda, diinta, iyo sayniska. Qorayaasha iyo aqoon yahanno cabaya diyaarid kaamil hadalka falsafada qoto dheer. Aan wax badan ayaa isbedelay ka maalmood ee hore kaasoo keenay in maanta oo ay tahay mid ka mid ah dukaamada aannu u jecel fiican kafeega in Europe.
Cafe Schwarzenberg waa dukaanka bunka fiican ee Vienna. Waa dhaqanka, qurux badan, oo si fiican u sawir leh kanaga xiga weyn Instagram sawir, #kafeega.
5. Brussels: bakeerigaagu
Thanks to goobaha sida Mok, Brussels soo gasho ay kaalinta on the Dukaamada ugu fiican Europe map.
Waxay gali hufaya miraha bunka ay isu taasoo micnaheedu waxa lagu ee ugu tayada sareeya.
oo dhan cunto u adeegeen at Mok waa khudrada, inta aad cabbi cad a delicious flat, aad gelin karaa Boorash macaan la nuts, bambeelmo, rummaanka, iyo yogurt vegan.
Starbucks ee Italy? Waxa uu dareensan yahay dulmi iyo weli, waa arin aad u xaq u. Espresso waa hadiyad Milan dunida siiyey iyo Milano Roastery bixiya caabudeen abuurka in xariif ah.
Waxaa lagu tilmaamaa tiyaatarka kafeega. Waxaa xaqiiqo ah ayaa meel on Dukaamada ugu fiican ee liiska Europe. Tani waa meel xaflad ah dhaqan qaxwada iyo waxay leedahay qol dhadhankiisu gobolka ah farshaxanka Roastery. Ka fikir Willy Wonka kulmay kafeega.
The Copenhagen Coffee Lab waa silsilad yar oo qalliin in laga sameynayo mawjado waawayn warshadaha qaxwaha. Waxaa si degdeg ah noqoto mid ka mid ah dukaamada qaxwada ugu fiican Yurub. The Copenhagen Coffee Lab Mu'min ah shirkad dhaqanka la ruxruxo saddexaad qaxwaha. Tani waxay ka dhigan tahay in ay maqsuud kafeega ah sida xooleed ama farsamo sharaabka ah oo si cad u dhigaya oo dhan farqiga u.
The milkiilayaasha Kaffeine u safray Australia iyo New Zealand oo wuxuu helay ay dhisato dukaan kafeega in ay furi karaa in London a. Ay riyo lagu gaadhay oo waxay u furay mid ka mid ah dukaamada qaxwada ugu fiican Yurub.
Sida Dukaamada ugu badan ee Europe, cuntada waa qayb ka mid ah waayo-aragnimo iyo Kaffeine waa laga reebo lahayn. Salladh, ismaris, iyo wax kasta oo foornada ka baxa ayaa ku jira liiska.
9. Edinburgh: diyaarid Lab
In Edinburgh, Lab dhiga waa on arrimuhu iyo waa mid ka mid ah dukaamada qaxwada ugu fiican Yurub.
Diyaarid Shaybaarka aqonsado in uu leeyahay dad igu dhuftay albaabbadooduna waxay muddo ka. Ay menu kafeega waxa ay markhaati u ay hamiday.
Waxaa qoreysa afar qoqobada bunka asal ahaan hal. Laba ayaa brewed ay bar diyaarid iyo labada kale ay espresso bar. nooeyada Coffee la raaxaystay ayaa la cake ama la dubo, oo Lab dhiga leeyahay yaraanta lahayn.
10. Prague: isku qasan
Modern, dhalaalaya, iyo vivacious, Misto waa waajib.
Magaca waa Czech waayo,, Meeshu. Waxay qaaska ah waa cabitaanka kafeega hodan iyo cuntada delicious.
No macno ah waqtiga, quraac, qado, ama casho, Misto idin soo dhowayn doonaa style run iyo hubi in aad hesho dhalato caffeine.
Riyaaqay our article “10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe”? Kitaabka la Save A tareenka iyo bilowdo kafeega safarka dhaqanka cafe!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / fr ama / es iyo luuqado badan.
cafe lover cafe coffeeculture TravelBrussels TravelLondon TravelMilan travelparis TravelVienna TravelZurich